हंसपुर Archives – Page2of9– Samacharpati
विराटनगरमा कोरोना संक्रमित वृद्धको मृत्यु
लकडाउन गर्ने/ नगर्नेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने
कोरोना कहर युथको लागि नयाँ अवसर भएको–व्याई सि.सि.को भनाई
पोखरा २ र अन्नपूर्णमा स्वास्थ्य सामाग्री वितरण
विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा बस्ने वातावरण मिलाउन गण्डकी सरकारसंग आग्रह
विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या ६ लाख ९२ हजार ७९४
मणिपाल अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरमा काेराेना संक्रमण पुष्टि
पोखराका सडकमा एनसिसिका क्याडेट, कोरोना अन्त्य भएको छैन भन्दै सचेतना
बिष्णु माझीको तीज गीत सार्बजनिक “आफ्नै बास्तबिकता पोखिन गीत मार्फत”: (भिडियो)
पोखराको अमरसिंहमा घाइते भेटिएका व्यक्तिको मृत्यु, शनाखत हुन सकेन
लायन्स पिस सिभिकको चार्टड नाईट सम्पन्न
गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सले पूर्णता पायो
पोखरा, १८ असार । गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सको कार्यसमितिले पूर्णता पाएको छ । मंगलबार गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष यदु अधिकारीले कमर्सको प्रथम उपाध्यक्षमा पोखरा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष किसान सुनारलाई चयन गरेका हुन् । कमर्सको द्वितीय उपाध्यक्षमा चेम्बर अफ कमर्स गोरखाका अध्यक्ष भाइ चन्द्र श्रेष्ठ, महासचिवमा राजु श्रेष्ठ मनोनित भएका छन् । […]
लेकसाइडमा १५ जना दलितले लिए १ महिने कुक तालिम
पोखरा, १८ असार । पोखराको बैदाममा एक महिने कुक तालिम सम्पन्न भएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ६ को आयोजना र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बैदाम उपशाखाको समन्वयमा भएको उक्त कार्यक्रममा उत्पिडित (दलित) समुदायका १५ जनाले तालिम लिएका छन् । कार्यक्रमको समापन गर्दै गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्ण थापाले उत्पीडित समुदायलाई लक्षित गरेर गरिएको कार्यक्रमले व्यवसायीक […]
देविलाल सापकोटा स्मृति समाजसेवी सम्मान गंगबहादुरलाई
पोखरा, १७ असार । देविलाल सापकोटा स्मृति समाजसेवी सम्मानबाट पोखरा–२५ हेमजाका समाजसेवी गंगबहादुर कुँवरलाई सम्मान गरिएको छ । लायन्स क्लब अफ पोखरा लालिगुरासले सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी समाजसेवी गंगबहादुर कुँवरलाई सम्मान गरेको हो । स्वर्गीय सापकोटाका परिवारले स्थापना गरेको अक्षयकोषबाट कुँवरलाई सम्मान गरिएको हो । कार्यक्रममा पोखरा महानगर पालिका वडा नं. २५ का वडा अध्यक्ष […]
महिलाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन झोला बुन्ने तालिम
पोखरा, १७ असार । गरिब तथा बिपन्न वर्गका महिलाहरुलाई सिप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित झोला बुन्ने तालिम सुरु भएको छ । लायन्स क्लब अफ पोखरा मिड टाउनको आयोजना तथा विधाता हस्तकला प्रशिक्षण केन्द्र अमरसिंहचोकको व्यवस्थापनमा तालिम सुरु भएको हो । २० जना महिलाहरु सहभागी उक्त तालिमको सोमबार एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरिएको छ । कार्यक्रममा […]
पोउवासंघ र उद्यमी व्यावसायी बिच छलफल
पोखरा १७ असार । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ पहिला विकास निर्माणको हिस्सेदार जस्तो मात्र लाग्दथ्यो तर अहिले बढी व्यावसायीको हितमा क्रियाशिल रहेको सदस्यहरुले बताएका छन् । उद्योगी व्यावसायीहरुको हक हितकालागि सरकार संग पहल गर्न संघ अघि बढेमा सबै व्यावसायीहरुको साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उद्यमी व्यावसायीहरुको प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउन विभिन्न तालिम गोष्ठी एवं […]
पोखरा २० का १ सय ३४ किसानलाई कृषी सामाग्री वितरण
पोखरा, १७ असार । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २० ले वडा भित्र रहेका अति विपन्न कृषकहरुलाई सहयोग सामाग्री वितरण गरिएको छ । वडाभित्र रहेका १ सय ३४ किसानलाई कृषी सामाग्री वितरण गरिएको हो । वडा स्तरिय बजेट १० लाख मध्ये पशुपालक किसानलाई ५ लाख र खेतीपाती गर्ने किसानलाई ५ लाखको सामाग्री वितरण गरिएको हो । […]
उपभोक्ता सेवामा खानेपानी सक्रिय
पोखरा, १७ असार । नेपाल खानेपानी संस्थान पोखरा शाखाका प्रमुख निरण महर्जनले संस्थान उपभोक्ता हितमा लागि परेको बताएका छन् । नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी संघ इकाई समिति पोखराको २६ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित वृक्षरोपण कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि इन्जिनियर महर्जनले कर्मचारीको एकतामा जोड दिँदै उपभोक्ताको हितमा समय खर्चन अनुरोध गरे । उपभोक्ताका चाहना अनुरुप सेवा दिनु […]
जुत्ता चप्पल बनाउने तालिम सकियो
पोखरा, १७ असार । आमा मिलन केन्द्रद्धारा संचालित मखमली जुत्ता, चप्पल बनाउने एक महिने सीपमूलक तथा नेतृत्व विकास तालिम सकिएको छ । करिब ४५ जनाले उक्त तालिम लिएका थिए । गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण पौडेल, पोखरा–८ का वडाध्यक्ष रुद्रनाथ बराल, संचारकर्मी दुर्गा अधिकारी र महिला अधिकारकर्मी तारा थापाले प्रशिक्षार्थीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेका […]
गण्डकी प्रदेशमा मदन भण्डारी फाउण्डेसन गठन
पोखरा, १७ असार । २०७६ साल असार १४ गते ,६७ औ मदन भण्डारी जयन्तीको अवसरमा पोखरामा मदन भण्डारी फाउण्डेसनको भेला सम्पन्न भयो । उक्त भेला फाउण्डेसनका केन्द्रीय सदस्य सोमनाथ प्यासीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो । भेला कमरेड मदन भण्डारी प्रति श्रद्धासुमन गरि शुरु गरिएको थियो । उहाँको फोटोमा पुष्प अर्पण गरि अगाडी बढेको भेलाको संचालन भिम […]
पन्ध्र दिने सिपमूलक व्यवसायीक तालिम सुरु
पोखरा, १७ असार । महिलाहरुलाई सिप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित पन्ध्र दिने सिपमुलक व्यवसायीक तालिम सुरु भएको छ । लायन्स क्लब अफ पोखरा, गण्डकी तथा पोखरा वुमेन हेन्डीक्राफ्ट डेभ्लबमेन्ट सेन्टरको संयुक्त आयोजनामा तालिम सुरु भएको हो । उक्त तालिमको उद्धाटन सोमबार एक कार्यक्रमका बीच लायन्स क्लब इन्टरनेशनल डिष्ट्रिक्ट ३२५ बि १ का पिएमसिसि ला दिपक […]
आफ्नो प्रेममा बाधक बनेपछि एक छोरीले आफ्नी ६० वर्षीया आमाको हत्या
आफ्नो प्रेममा बाधक बनेपछि एक छोरीले आफ्नी ६० वर्षीया आमाको हत्या गरेको खुलेको छ । आइतबार भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा ६० वर्षीय सावित्री भट्टराईको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या भएको थियो। महानगरीय अपराध महाशाखाले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै घटनाको अनुसन्धानको क्रममा साबित्रीको हत्या उनकै कान्छी छोरी इश्वरी भट्टराईले गरेको खुलेको जनाएको हो । हत्या आरोपमा प्रहरीले […]
पोखरामा महानिरीक्षक बिनोद शर्मा घिमिरेद्धारा निरीक्षण तथा निर्देशन सम्बोधन सम्पन्न
पोखरा, १५ असार । गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक बिनोद शर्मा घिमिरेले आज गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको निरीक्षण गर्नुभई कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुलाई व्यवसायिक प्रहरी सेवा प्रवाहको विषयमा निर्देशन सम्बोधन समेत गर्नुभएको छ । कार्यालयबाट सम्पादन हुने विभिन्न गतिविधि एव अन्य श्रोत साधनहरुको निरीक्षण साथै अवलोकन गरी प्रहरी सेवा प्रवाहलाई थप चुष्तदुरुष्त बनाउने […]
युरिक एसिड : कसलाई, किन र कसरी हुन्छ ? कसरी बच्ने ? यस्तो छ डाक्टरको सुझाव